Renin' Andriamanitra - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Theotokos)
Ny anaram-boninahitra hoe Renin' Andriamanitra dia anarana omen'ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa an' i Maria renin' i Jesoa. Izany anarana izany dia notapahin' ny konsily tao Efeso (na Efesosy na Efezy) tamin' ny taona 431 nefa i Aleksandra avy any Aleksandria no nampiasa azy voalohany tamin' ny taona 325. Amin' ny fiteny grika dia ny hoe Θεοτόκος / Theotokos ("niteraka an' Andriamanitra") no dikan' io teny io. Noho i Maria niteraka an' i Jesoa (na Jesosy) izay inoan' izy ireo fa sady olona no Andriamanitra no mahatonga izany. Raha sady olona tokoa no Andriamanitra tokoa i Jesoa dia sady niteraka olona tokoa no niteraka Andriamanitra tokoa i Maria niteraka azy, hoy ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa.
1 Ny kônsily tao Kalkedôna
1.1 Ny Fanekem-pinoanan' i Kalkedôna
2 Ny fampianaran' ny fiangonana hafa
2.1 Ny fampianaran' ny fiangonana loterana
2.2 Ny fampianaran' ny fiangonana kalvinista
2.3 Ny fampianaran' ny fiangonana tsy trinitariana
Ny Kônsily tao Kalkedôna na Kônsily tao Kalsedoana dia kônsily ekiomenika fahaefatra teo amin' ny tantaran' ny Fiangonana kristiana izay natao tao Kalkedona na Kalsedoana tamin' ny taona 430. Tamin' ity kônsily ity no nanambaràna ny fananan' i Jesoa natiora roa, dia natioran' Andriamanitra sy natioran' olombelona. Ny emperora Teôdôsio II no nampanao io kônsily io. Nivoaka tamin' izany ny Fanekem-pinoanan' i Kalkedôna izay namaritra ny fiombonan' ny natiora roan' i Kristy sady nanamafy koa ny maha Renin' Andriamanitra an' i Maria.
Ny Fanekem-pinoanan' i KalkedônaHanova
"Araka ireo Ray masina izany dia mampianatra amim-piraisam-peo izahay fa mitory Zanaka iray sady tokana, dia ny Tomponay Jesoa Kristy, ilay tanteraka amin' ny maha Andriamanitra, sy tanteraka amin' ny maha olombelona, Andriamanitra tokoa ary olona tokoa misy fanahy misaina sy vatana, mitovy fomba amin' ny Ray araka ny maha Andriamanitra sy mitovy fomba amintsika araka ny maha olombelona, manahaka antsika amin' ny lafiny rehetra afa-tsy amin' ny fahotana, nateraky ny Ray talohan' ny fotoana rehetra araka ny maha Andrimanitra, ary amin' ny andro farany izy tenany ilay nateraka ho antsika sy ho famonjena antsika avy amin' i Maria Virjiny, Renin' Andriamanitra araka ny maha olombelona, Kristy iray sady tokana, Zanaky ny Tompo, izay hany nateraka, ekena fa manana fomba roa, tsy mifangaro, tsy miova, tsy mizara ary tsy misaraka, ny mahasamy hafa ireo fomba roa ireo dia tsy foanan' ny fiombonana, ny toetran' ny fomban' ny natiora tsirairay dia voatahiry sady mandray anjara amin' ny persona sy hipostazy iray, dia Kristy tsy mivaky sy tsy misaraka ho persona roa, fa Zanaka iray sady tokana, tokana nateraka, Andriamanitra Teny, Tompo Jesoa Kristy."
Ny fampianaran' ny fiangonana hafaHanova
Tsy mitovy ny fandraisan' ny Prôtestanta io anaram-boninahitra hoe "Renin' Andriamaitra" io.
Ny fampianaran' ny fiangonana loteranaHanova
Ny Loterana dia nihazona ny anaram-boninahitra hoe "Renin' Andriamanitra" (alemàna: Mutter Gottes na Gottesmutter), izay efa neken' i Martin Lotera sady ambara mazava ao amin' ny Fôrmiolan' ny Kônkôrda (1577), izay eken' ny Lutheran World Federation.
Ny fampianaran' ny fiangonana kalvinistaHanova
Tsy manaiky ny anaovana an'i Maria ho Renin' Andriamanitra ny Kalvinista. Ekeny ny maha renin' ilay olona atao hoe Jesosa an' i Maria fa toheriny ny maha renin' ilay Andriamanitra an' i Maria. I Jean Calvin dia mitsipaka ny fiantsoana an' i Maria hoe "Renin' Andriamanitra".
Ny fampianaran' ny fiangonana tsy trinitarianaHanova
Ny fampianaran' ny antokom-pivavahana tsy mino ny Trinite dia mazava kokoa satria tsipahiny tanteraka ny fampianarana manao an' i Jesoa ho Andriamanitra. Isan' ireo fivavahana ireo ny Vavolombelon' i Jehovah.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Renin%27_Andriamanitra&oldid=1038676"
Dernière modification le 8 Oktobra 2021, à 13:15
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2021 amin'ny 13:15 ity pejy ity.